တရုတ်နိုင်ငံ OBC Q1-12KW DC12-120V 80-150A ပေါ့ပါးသော စွမ်းအားမြင့် အားသွင်းကိရိယာ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ | DCNE
Q1 စီးရီး AC220V & DC12-120V အားသွင်းကိရိယာ
OBC Q1-12KW DC12-120V 80-150A ပေါ့ပါးသော စွမ်းအားမြင့် အားသွင်းကိရိယာ
⭐ ထရပ်ကား၊ excavator၊ ကရိန်းစသည်ဖြင့် အချို့သော အကြီးစားယာဉ်များအတွက်။
⭐ ဘက်ထရီကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ဘေးကင်းစွာ အားသွင်းဖို့ ကြီးမားတဲ့ ပါဝါအားသွင်းကိရိယာ
⭐ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး IP67 ကာကွယ်မှုအဆင့်မြင့်မားသည်။
⭐ တာရှည်ခံပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
⭐ ဘက္ထရီ အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် အသုံးပြုသည်။
⭐ အခြားစွမ်းအားမြင့်ပစ္စည်းများနှင့် CAN BUS အမျိုးအစားအချို့ကို ပေးဆောင်ပါ။
12V၊ 24V၊ 36V၊ 48V၊ 60V၊ 72V၊ 80V၊ 84V၊ 96V၊ 108V၊ 120VDC
150A၊ 130A၊ 110A၊ 100A၊ 80A
EU/US/UK/AU ပလပ်၊ EU/US အားသွင်းသေနတ်နှင့် ပလပ်ပေါက် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)
DCNE Q1-12KW မှ အထွက်ဗို့အား 12V-120V၊ 80A-150A မှ အထွက်ဗို့အားဖြင့် board charger တွင် ထရပ်ကား၊ excavator၊ hoisting machine စသည်တို့ကို ကြီးမားသော ပါဝါမြင့်မားသော ထိရောက်မှုရှိသော ယာဉ်ကြီးများအတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ မြင့်မားသောကာကွယ်မှုအဆင့် IP67၊ အလုပ်သက်တမ်းကြာရှည်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ DCNE အားသွင်းကိရိယာများသည် PFC ပါရှိပြီး၊ ၎င်းသည် နှစ်ဆ သီးခြားဖြစ်သည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီနှင့် AGM စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. အလိုအလျောက် ညီမျှခြင်း
3. အပူလွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်ရေး
4. ငွေပိုမကုန်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်း။
မော်တော်ကားများအတွက်သာမက စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အခြေစိုက်စခန်းအချို့အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ယခင်- ပုံသေ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း 48v 80a ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ - OBC Q1-12KW DC12-120V 80-150A ပေါ့ပါးသော ပါဝါအားသွင်းကိရိယာ – Lingxiang
နောက်တစ်ခု: ဘုတ်ဘက်ထရီအားသွင်းစက် 48v 72v 96v ဘုတ်အားသွင်းလှေပေါ်တွင်ပါဝါ
OBC Q1-2KW DC12-108V 5-30A သင့်ဘက်ထရီအား အားသွင်းသည်...
OBC Q2-2KW DC48-99V 22-25A IP67 အားသွင်းကိရိယာအတွက်...
OBC Q2-9.9KW DC48-440V 30-127A မြင့်မားသောပါဝါ၊ ဘေးကင်းသော...